UGEORGE Maluleka omunye wabadlali ongabambezeleka ukuthi ajoyine iMamelodi Sundowns uma siphasiswa isiphakamiso seFifa sokwelula ukuphelelwa yisikhathi kwezinkontileka zabadlali
NHLANHLA SITHOLE | March 30, 2020
UMIKE Makaab enye yezimenenja ezihlonishwayo kuleli nephethe abadlali abadumile, usishayela ihlombe isiphakamiso seFifa sokwelula inzinkontileka zabadlali ukuze zihlangabezane nokuphazamiseka kwesizini ngenxa yokuhlasela kobhubhane, iCoronavirus.
“Yisiphakamiso esihle, okumele sishayelwe ihlombe. Uyacabanga nje, isixakaxaka esingenzeka uma kuthiwa imidlalo ayipheli. Kungonakala izinto eziningi ngoba abaxhasi nabamathelevishini bafuna imidlalo iphele. Abadlali nabo kufanele bakuqonde ukuthi okwenzekayo akuthinti bona kuphela kodwa abantu abaningi. Ngakho wonke umuntu kufanele abambe iqhaza ekutheni kuliwe nobhubhane,” kubeka uMakaab.
Lemenenja ibiphawula ngesiphakamiso seFifa sokuthi izivumelwano eziphakathi kwamaqembu nabadlali, ebezizophela ngokuphela kwesizini zelulwe njengoba kunongabazane ngokuphothulwa kwemidlalo ngesikhathi, ngenxa yokubanjezelwa wukuqubuka kweCoronavirus, emhlabeni jikelele.
Le siphakamiso sivele emuva kokuputshuka kwedokodo eliyimfihlo leFifa elitholwe yiReuters, elibizwa ngeCoronavirus Working Group, nokulindeleke ukuthi iFifa Working Group ilidingide ngoLwesine kanti asikho isinqumo esingujuqu esesithathiwe.
Uma kuwukuthi lezinguquko ngezinkontileka zabadlali zigcina zenzekile, abadlali abazokhahlamezeka kakhulu yilabo asebevele besayine izivumelwano zesibambiso namaqembu amasha.
Abadlali asebevele benezibambiso namanye amaqembu ngokujwayelekile kufanele baqale emisebenzini emisha ngoJulayi lapho amaqembu eseqala ukwenza amalungiselelo okuqala kwesizini entsha.
USifiso “Jomo” Biyela, umqondisi nomnikazi weRichards Bay FC edlala kwiGladAfrica Championshp uthe: “Ayikho into engenziwa. Engibona kumqoka wukuthi manje kufanele kuqikelelwe ekutheni izivumelwano zidwetshwa ngendlela ezovikela wonke umuntu ngoba sisuke siphakathi kwabantu ababili abangena kusona. Inkinga ezokuba khona ngabadlali asebevele besayine le zinkontileka, abese bezitshela ukuthi sebeqedile izibophezelo sezinyanga eziyisithupha emuva kokuthi bethole amadlelo aluhlaza kwamanye amaqembu ngoba ngeke besazinikele ngokugcwele emaqenjini amadala kulezi nyanga isizini ezokube yelulwe ngazo.
“Ngeke kusaba khona ukuzimisela ngenhliziyo yakhe yonke ngoba vele isikwenye indawo. Uyacabanga nje, umdlali osesayine isivumelwano seminyaka emithathu ngetshe lemali, okungathi uma elimala ngesikhathi sokwelulwa kwesizini konke lokho kushabalale, kuzokuba yinkinga impela,” kusonga uBiyela.
ULunga Sokhela uthe: “Kubalulekile ukuthi imidlalo idlalwe iqedwe ngoba kungonakala izinto eziningi ezithinta umthetho.”
Uthe abadlali abazoshayeka kakhulu yilabo abadlala kwiGladAfrica ngoba ngokujwayelekile amaqembu alesigaba asayinisa izivumelwano zesizini eyodwa.
“Uma sekuthiwa inkontileka iyelulwa ngenxa yokuthi isizini ayiphelanga ngesikhathi esinqunyiwe kusho ukuthi bazobambezeleka ngaleso sikhathi ngaphambi kokuthi bajoyine amaqembu asebevele bewaqomile,” kusho uLunga.
Umdlali osephumele obala ukuthi usesayine isivumelwano sesikhashana neMamelodi Sundowns nguGeorge Maluleka, okungathi uma lesiphakamiso siphasiswa kubambezeleke ukuya kwakhe eChloorkop.
Isitatimende seFifa sithi: “Ukuhlolisisa isidingo sokuchibiyela okwesikhashana kwemitheshwana elawula ukushintshisana ngabadlali inhloso ukuvikela izivumelwano zezinhlangothi zombili, zabadlali namaqembu nokulungiswa kwesikhathi sokubabhalisa.
“Lo msebenzi usuvele usuqalile kanti uzokwenziwa ngokubonisana nazo zonke izinhlaka ezithintekayo, okukhona nezinhlangano ezengamele unobhutshuzwayo, amaqembu, amaligi nabadlali.”